रवीन्द्र मिश्रजी, मार्ग परिवर्तन होइन राजनीतिबाट अवकाश – Newsrekha
न्यूजरेखा । १८ श्रावण २०७८, सोमबार १०:५२ बजे
दोस्रो भेटमा बन्नै लागेको साझा पार्टीमा संलग्न हुने विषयमा ‘म सोच्छु’ भनेर म छुट्टिएँ। मैले सोचेर संलग्न नहुने विचार गरेँ र मिश्रलाई सन्देश पठाएँ। त्यसयता म जिम्मेवार मतदाता भए पनि कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छैन। तर यो अवधिमा विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी र अहिलेको विवेकशील पार्टी सबैलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। तिनीहरूको वर्तमान र भविष्यबारे प्रशस्त चिन्ता र चिन्तन पनि गरेको छु।
मिश्रले जम्मा गरेको ‘बौद्धिक र इमानदार’ मानिसहरूको मुख्य समस्या के भने विचारहरूको इमानदार मन्थनमार्फत आफैं पनि बदलिन र फरक मत राख्नेहरूसित सम्झौता गर्दै जान उनीहरू तयार थिएनन्। हरेक कुरामा प्रश्न गर्ने पार्टीभित्रका युवाहरू उनीहरुका लागि अबोध बालबालिका थिए जसका कुरा सुनेर गुन्नुभन्दा उनीहरूलाई शिक्षित गर्नु जरूरी थियो।
उनी भन्छन्- नेपालमा अहिले रहेका सारा समस्याको जड भनेको हुनु नपर्ने तर २०६३ सालपछि हठात् ‘लादिएका’ संघीयता र धर्म निरपेक्षता अनि गलत रूपमा अभ्यास भएको गणतन्त्र हो। तिनको सरल समाधान संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह अनि गणतन्त्रको सुधार गर्नु हो।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले ‘आप्रवासीहरूले अमेरिकालाई थला पारे, तिनलाई रोकेपछि अमेरिका फेरि महान हुन्छ’ भने। बेलायतमा नाइजल फराज र बोरिस जोन्सनहरूले गलपासो जस्तो युरोपियन युनियनलाई पन्छाउन सके बेलायत महान् भइहाल्छ भने। फिलिपिन्समा रोड्रिगो दुतेर्तेले लागुऔषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई सिध्याएपछि फिलिपिन्समा फलिफाप भइहाल्छ भने।
यो अवस्थामा मिश्रले दर्जनौंपल्ट दोहोर्‍याएर इंगित गरेको संघीयता र धर्म निरपेक्षताका कारण आकाशै खस्न लागेजस्ता समस्या र संकट के हुन्? यो समयमा विनाआधार तिनलाई उराल्नुको औचित्य के हुन सक्छ? यस्तै निबन्धहरूबाट त्यस्ता संकटको कुरा उरालेर ‘सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी’ सिर्जना गर्न खोजेका त होइनन् मिश्रले?
खास गरी हिन्दु राष्ट्रको ‘जायज’ माग सुनुवाइ नगर्दा हिन्दुवादीहरूको अतिवादी राजनीति हावी हुन सक्छ भन्ने उनको जिकिर विश्लेषणभन्दा पनि धम्की प्रतित हुन्छ। उनले जनमत संग्रहमार्फत हिन्दु राष्ट्र फर्काउने अभियानलाई उग्र हिन्दुत्वको राजनीति रोक्ने उपायका रूपमा चित्रण गरे पनि यथार्थमा त्यसको परिणाम उल्टो हुने अर्थात् नेपाली समाजमा भारतमा झैं धार्मिक राजनीति मूलधारमा आउने निश्चित देखिन्छ।
यसरी लामो समय लोक कल्याणकारी राज्यजस्ता रंगीन पहिरनहरूभित्र लुकाएर राखिएको मिश्रको असली राजनीतिक दर्शन निबन्धमा टड्कारो रूपमा प्रकट भएको छ। त्यो गुदी भारतका आरएसएस–भाजपाले अभ्यास गर्ने हिन्दुत्वको राजनीतिभन्दा तात्विक फरक हुनेछ भन्नेमा मेरो आशंका छ। त्यसमाथि पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा आफ्ना विचार र दर्शनबारे पार्टी पंक्ति र आम मानिसमा उनले जति भ्रम छाडेर छलछाम गरेका छन्, त्यो हेर्दा ‘म जे सोच्छु, देशको भलाइकै लागि सोच्छु’ भन्ने उनको दाबीलाई पत्याइहाल्न पनि मुश्किल छ।
त्यो राजनीतिले आज भारतलाई कहाँ पुर्‍याएको छ भन्ने कुरा हामीसामु छर्लंग भइरहँदा ‘सुसंस्कृत राजनीति’को छलकारी नारा लगाएर पार्टीमा गोलबद्ध गरिएका युवालाई हिन्दुत्वको राजनीतितिर डोर्‍याउने जस्तो भद्दा र खतरनाक राजनीतिक बेइमानी मोरे विचारमा अर्को हुन सक्दैन।
‘०६२-०६३ को आन्दोलनमा कता लाग्यो संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको नारा?’ अबोध स्कुले बालकले झैं अहिले सोध्दैछन् कमल थापा, महेश बस्नेत र रवीन्द्र मिश्रहरू।
राजाको सक्रिय शासनको वैधताको स्रोत के थियो? दैवी। त्यस्तो ‘दैवी’ वैधता जबसम्म आम नागरिकलाई मान्य थियो, तबसम्म राजा र राजसंस्था पनि मान्य थिए। त्यो अवस्थामा कसैले पनि नेपालमा धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र थोप्न सक्दैनथ्यो।
‘जनता जति मूर्ख, मै मात्र जान्ने’ भन्ने मिश्रको त्यस खाले अधिनायकवादी अडानले नेपाली नागरिकहरूको विवेक र निर्णयलाई निषेध गर्ने डर लाग्दो प्रयास गरेको छ। अनि उक्त निबन्धमार्फत उनले अबोध बच्चासरह खुरुखुरु विदेशीको एजेन्डा र इशारामा भोट हालिरहेका मतदातालाई सही बाटो देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
अनि उमेर र चेतना दुवैका हिसाबले दुई दशकअघि बढेका सहयात्री नागरिकहरूलाई इतिहासको त्यही किनारबाट उनले गिल्ला गरिरहेका छन्, ‘ए अबुझ रैतीहरू हो, अरूले थोपरिदिएको धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको भारी कहिलेसम्म बोकेर हिँड्छौ? यी यता हेर त राजा कति लोकप्रिय छन्, अनि एकात्मक राज्य कति बलियो समृद्ध र स्वर्गजस्तो छ।’
म अझै पनि उक्त निबन्ध लेख्दाको मिश्रको मनोभाव र ‘मोटिभ’बारे प्रष्ट हुन सकेको छैन।
निबन्धको ‘मोटिभ’ जेसुकै भए पनि परिणाम मेरो विचारमा एउटै भएको छ- नेपालको राजनीतिमा रवीन्द्र मिश्रको औचित्य अब सिद्धिएको छ। निधारमा अनुदार हिन्दुवादी राजनीतिको ठप्पा लगाइसकेपछि उनी जति पछिसम्म कथित वैकल्पिक राजनीतिमा ठाउँ ओगटेर बसिरहन्छन्, त्यति नै नेपालका भ्रष्ट र अकर्मण्य ठूला राजनीतिक दलहरू समाज र देशका रूपमा नेपालका लागि सापेक्षतः कम हानिकारक देखिइरहनेछन् र चुनाव जितिरहनेछन्।